Hikaroka sary maimaim-poana | Ho an'ny ankizy miloko - tadiavo ny totozy
Mikaroha sary - Mitadiava totozy
Ny sary mikaroha dia sary izay miafina ny zavatra ary tokony ho hitan'ny mpandinika ireo zavatra ireo. Ny sary fikarohana anay dia miompana amin'ny ankizy amin'ny resaka fahasarotana.
Mikaroha sary ho an'ny ankizy - Mitadiava totozy
Misy totozy miafina amin'ireo sary fikarohana rehetra tadiavinay. Mba hitazomana ny fombantsika, ny sary fikarohana rehetra dia mety amin'ny fandokoana. Mirary fikarohana, fikarohana ary fandokoana mahafinaritra. Ny fanindriana ny rohy dia manokatra ny pejy tsirairay misy ny sary karoka:​​
Angamba mitady ny olona hilalao ny totozy? Fa taiza izy no niafina?
Tsy maintsy mandeha vakansy ihany koa ny totozy indraindray ...
Betsaka ny olona. Ratsy totozy, aiza izy?
Tsy dia misy ambara? Totozy eo amin'ny toeram-piompiana
Tadiavo ny totozy alohan'ny hidirany amin'ny fiaramanidina
Aiza ny totozy miafina amin'ity kianja filalaovana ity?
Azafady mifandraisa aminay raha tsy hitanao ny totozy 🙂
Zavatra miafina "Ao an-tanàna" - Mitadiava lesoka telo
Mitady sary ho an'ny ankizy - Mitadiava totozy eny an-tsena
Mikaroha sary ho an'ny ankizy - Mitadiava totozy eo amoron-dranomasina
Mikaroha sary ho an'ny ankizy - Mitadiava totozy ao amin'ny kianja filalaovana
Mikaroha sary ho an'ny ankizy - Mitadiava totozy eo amin'ny toeram-piompiana
Mikaroha sary ho an'ny ankizy - Mitadiava totozy eo amin'ny seranam-piaramanidina
Tanànan'ny zavatra miafina - tadiavo ny sigara
Lamin'ny lesoka - tadiavo ny fahasamihafana